म निकै राम्रो पढ्ने विद्यार्थीमा पर्थें, तर आज जीवनलाई फर्केर हेर्दा ती अंक शून्य लागिरहेछन्
दोष समाजको अनि शिक्षाकै छ । हाम्रो शिक्षा ‘कस्मेटिक’ बन्दै छ । फोटो राम्रो निकाल्न फोटो एडिट गर्ने हो कि, मान्छे राम्रो बनाउने हो ? हाम्रो शिक्षाले फोटो एडिट गर्ने बाटो रोजेको छ । धेरैलाई पास गराउनलाई राम्रो शिक्षा दिनेभन्दा पनि अन्य बाटो खोज्छ । धेरैलाई पास गराउँछ । गेस पेपरमा प्रश्न बाँड्छ अनि चिट चोराएरै भए पनि शतप्रतिशत पास गराउँछ । अनि, फेरि त्यही नतिजालाई नै सर्वस्व मान्छ । हामीले शिक्षालाई सुधार्न जरुरी छ । शिक्षाप्रतिको धारणा बदल्न जरुरी छ । शिक्षालाई जीवनसँग जोड्न जरुरी छ । एसइईमा कम नम्बर आएछ वा फेल नै भइएछ भने पनि केही फरक पर्दैन । लाग्दो हो, साथीहरू पास भए कहाँ पुगेँ, म छुटेँ ।
एउटा के भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ भने तपाईंको बाटो अनि साथीको बाटो फरक छ । प्रत्येक मानिसको आफ्नै गति छ अनि आफ्नै बाटो छ । तपाईंको संघर्ष अनि जित, तपाईंको साथीको भन्दा फरक छ । तपाईंले एक–दुई वर्ष ढिलो परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभयो वा अलिकति अंक कम ल्याउनुभयो भन्नुले लामो दौडमा केही माने राख्नेवाला छैन । केवल तपाईंले तपाईंलाई पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ वा हुँदैन भन्नेले मात्र माने राख्छ । एसएलसी फेल भएर वा बी प्लस वा सी प्लस नै आएर के भो र ? कतै जीवन संघर्षको यात्रामा तपाईंकै कक्षाका टपरलाई जागिर खुवाउने संयोग पो जुर्छ कि ?
एपलको नयाँ आइफोन एक्सएस, एक्सएस म्याक्स र एक्सआर
पूर्वी नेपालबाट मनसुन प्रवेश
प्रक्रिया पुर्‍याएरै सम्बन्धन दिइएको हो, स्थगन हुँदैनः कृषि विश्वविद्यालय
ज्योतिष गल्ली : जहाँ हत्केलामा भाग्य खोजिन्छ !